Ogaden News Agency (ONA) – Haya’dda HRW oo wareysiyo la yeelatay dhibanayaasha soo galay xerada qaxootiga Dhadhaab
Haya’dda HRW oo wareysiyo la yeelatay dhibanayaasha soo galay xerada qaxootiga Dhadhaab
Posted by ONA Admin	/ April 23, 2014
Hay’ada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa maalmahanba waday wareeysiyo ay layeelanaysay qoxootiga S.ogadenia ee kudhaqan xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab. Hay’ada human Right Watch ayaa waday shirarka iyo kulamada ay ku Ogaanayaan xogta dhabta ah ee kajirta Ogadenia waxayna bilowday 21dii bishan ilaa 23 bishan oo ay kulankoodii 3aad laqaateen dhibanayaasha ree ogadenia ee kudhaqan xerada qoxootiga ee Dhagaxlay.
Kulankan oo kadhacayay magaalada Dhadhaab ayay dad aad ufarabadan oo ree Dhagaxlay ah kasoo qayb galeen waxayna soo buuxdhaafiyeen xerada ay UN ku leedahay magaalada Dhadhaab ee Gobolka W/bari Kenya. Kulankan oo bilowday abaare 9:30 xiliga Dhadhaab ayaa ku bilowday qaab kulan guud oo ay yeesheen 3 xubnood oo kasocday hay’ada udooda xukuuqda aadamaha iyo dadwaynihii kulanka kasoo qayb galay ka hor inta aan labilaabin waraysiyada lala yeelanayay dadwaynaha ree Ogadenia ee waxyeelada kasoo gaadhay xukuumada Itoobiya.
Ugu horaynba waxaa hadalkii bilaabay nin ka socday haya’adda Human Right Watch una qaabilsan arimaha Itoobiya oo lagu magacaabo Flixy wuxuuna sheegay in ay howshan lawadaan 2 gabdhood oo midi ay tahay haweenayda hay’ada u qaabilsan Africa laguna magacaabo Letica iyo gabadh kale oo lagu magacaabo Jimy kana mid ah madaxda hay’ada wuxuuna goobta kasheegay in ay dhalasha ahaan kasoo jeedaan Yurub iyo America. Wuxuu mr. Flixy dadwaynihii ku waaniyay kana codsaday in ay maanta soo bandhigaan wixii dhibaata ah oo ay sheeganayaan wuxuuna u sheegay in ay ka jawaabayaan wixii su’aal ah ka hor inta ayna bilaabin waraysiyada, waxaana lawaydiiyay dhowr su’aalood oo muhiim ahaa.
Gabadh kamid ahayd dhibanayaashii shirka fadhiyay ayaa weydiisay; madhabbaa in aan si xor ah u sheegan karo dhibaatadayda islamarkaana aduunka loo gudbin doono dhibaatada aan sheegto? Hadalkaas oo ay aad ulayaabeen ayaa dhaliyay in ay soo bandhigaan 2 buug oo ay mid kamid ah xaaladaha bini’aadam nimo ee Ogadenia ka qoreen sanadkii 2008 iyo buug kale oo ay mar aan fogayn ka qoreen magaalada Adis ababa iyo nawaaxigeeda, waxayna intaas kudareen in loodiiday in ay tagaan Ogadenia iyo guud ahaan Itoobiya ayna doorbideen in ay dadka ree Ogadenia ku waraystaan wadamada dariska ah oo waxay u sheegaan ay balan qaadayaan in ay
aduunka gaadhsiin doonaan iyo wixii dhibaata ahee ay kala kulmaan goobtan ay maanta joogaan.
Hadaladii ay aad ulayaabeen ee maanta lagu yidhi waxaa kamid ahaa iyaga oo lagu yidhi wadamada aad udhalateen ayaa dhibaatada Ogadenia qayb ka ah waayo waxay bixiyaan dhaqaale iyo rasaas nalagu laayo waxayna ahayd hadaladii ay aadka uga garaabeen sigooni ahna ay uqorteen.
Intaa kadib waxaa bilowday waraysiyadii ay dadka layeelanayeen oo runtii ahaa kuwo xanuun badan waxaana goobtu ay wareeysiyadu kasocdeen ay isu badashay goob murugo kadib markii ay ilin ka qubatay gabdho iyo wiilala ka warbixinayay dhibaatadii ay ugaysteen ciidamada Itoobiya, waxayna indhahaygu qabanayeen shaqaalihii HRW oo u dhimrinaya dad aad u ooyayay.
Dadka arimahooda aad loogu mashquulay waxaa kamid ahaa gabadh hal bil uun joogtay xeryaha Dhadhaab oo cunug ay dhashay oo aad uyar ay ciidamada Itoobiya qaateen kadib markay iyada waayeen oo ay duurka u carartay gabadhan ayaan cunugeedii ay kucuratay aan wakhti xaadirkan meela ku ogayn.
Shirkii ayaa soo gaba gaboobay abaare 3:00 galabnimo wuxuuna kudhamaaday xusuus murugo leh iyo dardaaran ka imanayay dhanka dhibanayaasha oo codsanayay in aduunka lagaadhsiiyay dhibaatooyinka baahsan ee kajira wadanka aan saxaafada iyo hay’adaha toona loo ogolayn ee Ogadenia.